Shiinaha Warqad kraft dhaqe ah oo la dhaqi karo oo la dhaqi karo Sibir Seme Qurxinta Bacda Cilmiga Dabiiciga ah iyo alaab-qeybiyeyaasha | Changlin
Boorsada Meeriska Xiritaanka ee Meel-galka ah ee lagu qurxin karo warqad gacmeed lagu dhaqi karo
Sida magacaba ka muuqata, warqad gacmeed la dhaqi karo waa nooc cusub oo ah maaddada ilaalinta deegaanka, oo si weyn looga isticmaalay adduunka. Waxyaabaha ceyriinka ah ee warqadda kraft-ka ah ee la dhaqay waa qashir dabiici ah, oo aan ku jirin walxo waxyeelo leh. Waa dib-u-warshadayn, xaalufin, iyo dib-u-habayn lagu samayn karaa.
Waxyaabaha: Waraaq Kraft ah Miisaanka: 42g
Codsiga: qurxinta, musqusha, guriga, ganacsiga safarka
Faa'iidada: wax baabi'in kara,dib loo cusbooneysiin karola dhaqi karo
Waraaqda gacanta lagu dhaqi karo ma aha oo kaliya adkeysiga, qallafsanaanta, iska caabinta abrasionka iyo astaamaha kale ee warqadda warqadda ah, laakiin sidoo kale waxay leedahay astaamo maaddooyinka dharka lagu dhaqo sida kuwa la dhaqi karo, kuwa qalalan oo nadiif ah; warqad kraft ah!
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira waxyaabo yaryar oo ka sameysan warqad gacmeed lagu dhaqi karo oo suuqa ku jira, sida boorsada jeebka lagu qaato, kiiska IPAD, boorsada kaarka, boorsada gacanta, daboolida warqad-dhamaadka sare iyo wixii la mid ah. Qaar ka mid ah walxahaas waa la xoqi karaa ka hor intaan la isticmaalin, iyo ka dib xoqidda, badeecaddu waxay sameyn doontaa laab dabiici ah, saameyn dabiici ah oo dabiici ah iyo nostalgic!
Waraaqda gacmeed ee la dhaqi karo waa kaarboon yar iyo jawi ku habboon deegaanka. Waxay xallinaysaa dhibaatada in bacda waraaqaha ee kraft-ka ah aysan u dulqaadan karin wasakh waana la dhaqi karaa markay wasakhoobaan.
wax dabiici ah, si fudud loogu dhiso
Hore: Boorsada bacda musqusha ee la isku qurxiyo ee la isku qurxiyo
Xiga: Bacda Tyvek Waraaqda Waara Doonta Meel-jiifka Xidhitaanka Qurxinta Dabiiciga ah Bacda Qurxinta Dabiiciga ah
Bacda jilicsan ee la qaadan karo
Fabric Dabiiciga isticmaali karo bac bac qurxiyo pac ...
Kumbuyuutarka Gawaarida Lacagta ah ee loo yaqaan 'PU Pos qurxinta'
Nylon madow safarka qurxinta ganacsiga safarka p ...